Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » WTTC na -anabata ndụmọdụ ọhụrụ sitere na EU
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Technology • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
wttc nchebe njem stampụ
Ndị ozi na ndị na -eme mkpebi mba ụwa na etiti ọha na -agbanwe mmachi njem kwa ụbọchị. Enweghị nkwado zuru ụwa ọnụ na enweghị usoro zuru ụwa ọnụ na -eme ka mba ụwa bụrụ ihe ịma aka, ọbụlagodi ndị njem ọgwụ mgbochi ọrịa.
Dị ka WTTC mere na mbụ, nzukọ na -anọchite anya ndị otu kachasị na njem njem na njem nlegharị anya taa mere nkwupụta ọzọ na ndepụta chọrọ.
Ọ bụrụ na nkwupụta a ga -enyere aka weta mmemme ọ bụla echere ka a hụ ya.
Julia Simpson, Onye isi ala na onye isi oche nke World Travel and Tourism Council (WTTC) wepụtara nkwupụta na-asị: “Ichebe ahụike ọha ga-abụrịrị ihe kacha mkpa na WTTC na-akwado usoro nchekwa iji kwụsị mgbasa nke COVID-19.
Agbanyeghị, nkwenye EU ka eweghachite mmachi na ndị njem US bụ nloghachi azụ ma ọ ga -akwụsịlata mgbake nke ngalaba ahụ.
“Site na ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi dị elu na US na EU, anyị kwesịrị ịdị na -ele anya imepe njem n'etiti nnukwu akụ na ụba abụọ a.
Onye isi WTTC kwukwara, sị:
Anyị chọrọ otu usoro iwu nke na -amata ọgwụ mgbochi ụwa ma wepụ mkpa ichepụ iche maka ndị nwere nsonaazụ COVID na -adịghị mma.
“US bụ isi mmalite ahịa maka ọtụtụ mba ndị otu EU, dịka France, Italy, Germany, na Ireland, na njem ga -adị oke mkpa na iweghachi ndụ nkịtị na puku kwuru puku ọrụ na US na EU.
"Kama itinye mmachibido njem ọzọ na -emebi ihe, EU kwesịrị ịgba ndị otu mba ume ka ha jiri asambodo dijitalụ COVID dị egwu iji weghachi njem mba ofesi n'enweghị nsogbu, nke bụ isi maka akụ na ụba Europe."
The European Union ga -akwụsịtụ njem niile dị mkpa maka ndị ọbịa America n'ihi mmụba nke ọrịa COVID-19 ọhụrụ na United States.
Portugal, onye otu EU taa siri na ụkpụrụ EU pụọ wee kwupụta na ọ ka ga -anabata ndị njem America.
Portugal ka ghe oghe maka ndị njem US n'agbanyeghị ndụmọdụ EU
September 2, 2021 na 13: 32
okwu a na -efu bụ “AGBARA” nke ewepụrụ n'okwu m.
September 2, 2021 na 13: 30
Biko bụrụ eziokwu n'edemede gị… .ị hapụrụ okwu dị mkpa na ahịrịokwu a - edepụtara na brackets:
"European Union ga-akwụsịtụ njem niile dị mkpa maka ndị ọbịa America n'ihi mmụba nke ọrịa COVID-19 ọhụrụ na United States."
Ị na -eme ajọ ihe site n'ịghara ịkọ akụkọ ziri ezi.